Goolasha.net | Archive | Dagmooyinka | 3
Home » Archives by category » Dagmooyinka (Page 3)
Maxaa kala heysta dagmooyinka kala ah Dayniile iyo Hodan.
dagmooyinka kala ah Hodan iyo Dayniile ayaa galabta ku balansan garoonka Jaamacadah ee dagmada Hodan kulan ka tirsan tartanka Gobolka Benadir sanadka 2016-17. dagmada Hodan kulankii ugu dambeyay waxeey guul ka soo gaartay dagmada Yaaqshid kulan ku soo dhamaaday 3-0 ay guusha ku raacday kooxda Hodan. dhanka kale dagmada Dayniile ciyaartii ugu dambeysay waxeey la […]
Xamar Weyn iyo H/wadaag oo tartanka dagmooyinka ka ah natiijooyinke shaley ka dhacay Tartanka dagmooyinka.
Kulamo ka tirsan tartanka Dagmooyinka ee Gobolka Benadir ayaa shaley lagu ciyaaray garoomada kala duwan ee Banadir Stadium iyo Jaamacadaha ee Dagmada Hodan. Garoonka Banadir Stadium ayaa shaley kuwada dheelay dagmooyinka kala ah Xamar Weyn iyo H/wadaag kulankaas oo ku soo dhamaaday 2-0 ay guusha ku raacday dagmada Xamar Weyn balse Nasiib daro tartanka weey […]
Xamar Weyn iyo H/wadaag oo galabta ku balansan garoonka Banadir Stadium.
Dagmooyinka kala ah Xamar Weyn iyo H/wadaag ayaa galabta ku balansan ineey ku ciyaaran garoonka Banadir Stadium ee dagmada Cabdicasiis kulan ka tirsan tartanka Dagmooyinka Gobolka Banadir 2016-17. Dagmada H/wadaag ciyaartii ugu dambeysay waxeey bar baro la soo gashay dagmada Dharkenley kulan ku soo dhamaaday 0-0. Xamar Weyn kulankii ugu dambeyay waxeey guul daro kala […]
Falanqeynta kulanka u dhaxeeya dagmooyinka kala ah Hilwa iyo Dharkenley.
kulan xiiso badan ayaa galabta ka dhici doona garoonka Jaamacadaha ee dagmada Hodan kaa uu u dhaxeeya dagmooyinka kala ah Hilwaa iyo Dharkenley kulan qeyb ka ah tartanka dagmooyinka. Hilwa kulankii ugu dambeyay waxey ka soo adkaatay dagmada Xamar weyn kulan ku soo dhamaaday 2-1 ay guusha ku raacday wiilash Hilwa. sido kale dagmada Dharkenley […]
Shangaani oo iskaga hartay tartanka Dagmooyinka xili Boondheere ay u soo baxday, kulamadii shaley ka dhacay tartanka Dagmooyinka iyo natiijadooda.
kulamo ka tirsan tartanka dagmooyinka ayaa shaley ka kala dhacay garoomada kala duwan ee Banadir Stadium iyo Jaamacadaha kuwaaso ku ciyaaray dagmooyinka kala ah Kaxda vs Shangaani iyo Boondheere vs Xamar Jajab. Groonka Banadir Stadium ayaa kuwada ciyaaray dagmooyinka kala ah Kaxda iyo shangaani kulankaas oo ku soo dhamaaday 5-2 ay guusha ku raacday kooxda […]
MAQAAL: maxaan ka xasuusana wareegii koowad ee tartanka dagmooyinka Gobolka Banadir 2016-17, waa side xalaada Group-yada.
Kulankiii 18 aad tartanka degmoyinka gobolka banadir ayaa galabta lagu wadaa in lagu ciyaaro Labada garoon ee Koonis iyo Jaamacadaha Taagerayaal aad u tiro badan oo sida turbaano calamo iyo agab kale oo dhiiri galiyo Ciyaartoyda ayaa malin kasta soo xadira garoonka waa qaar ka mid ah taagerayashii Gil gilay garoomadan tan iyo markuu tartanku […]
Falanqeynta kulanka u dhaxeya dagmooyinka kala ah Kaxda iyo Shangaani
Kulan xiiso badan ayaa galabta ka dhici doona garoonka Banadir Stadium ee dagmada Cabdicasiis kaa uu ka tirsan tartanka dagmooyinka wuxuuna u dhaxeeya Shangaani iyo Kaxda. Kooxda Shangaani kulankii ugu dambeyay waxeey guul daro xanuun badan kala soo kulantay dagmada Shibis. Kaxda kulankii ugu dambeyay waxeey bar baro la soo gashay dagmada Xamar Jajab. Kulankan […]
Maxaad ugu baahan tahay inad ka ogaato ciyaarta u dhaxeysa dagmooyinka Boondheere iyo Xamar Jajab.
Dagmooyinka kala ah Boondheere iyo Xamar Jajab ayaa galabta ku balansan garoonka Jaamacadaha ee dagmada Hodan kulan ka tirsan tartanka dagmooyinka ee Gobolka Banadir. Boondheere kulankii ugu dambeyay waxeey guul ka soo gaartay dagmada Shangaani halka dagmada Xamar jajab ay bar baro la soo gashay dagmada kaxda. Boondheere ayaa tartanka dagmooyinka ku guuleysatay sanadkii la […]
Maxeey ku kala baxeyn dagmooyinka kala ah Cabdicasiis iyo Warta Nabada sido kale Kaaraan iyo Wadajir, natiijoyinkii shaley.
Kulamo ka tirsan tartanka dagmooyinka ayaa shaley lago ciyaaay garoomada kala duwan Jaamacadaha iyo Banadir Stadium waxaana shaley fooda is daray dagmooyinka kala ah Wadajir iyo Kaaraan sido kale Cabdicasiis iyo Warta Nabada. Kulankii ugu xiisaha badana waxaa shaley wada yeeshay Dagmooyinka kala ah Kaaraan iyo Wadajir kaa uuka dhacay Garoonka Banadir Stadium waxeyna ciyaartas […]
Wax waliba aad ugu baahan tahay kulanka u dhaxeeya dagmooyinka kala ah Wadajir iyo Kaaraan.
kulan xiiso badan ayaa galabta ka dhici doona garoonka Banadir Stadium ee dagmada Cabdicasiis ciyaar qeyb ka ah tartanka dagmooyinka 2016-17 wuxuuna kulankan u dhaxeeya dagmooyinka kala ah Wadajir iyo Kaaraan. Labadan dagmo mid guul ayee wadata midna guuldaro ayee xanbaarsan tahay iyagu ku jira Group D. Dagmada Kaaraan ciyaartii ugu dambeysay waxey guul weyn […]